Igwe eji agba nchara: ihe ọ bụ, otu esi eji ya, na nke ị ga -ahọrọ | Ngwaike efu
Igwe na -agbaze gbamgbam: gịnị ka ọ bụ, otu esi eji ya, na nke ị ga -ahọrọ
Isaac | 20/09/2021 09:00 | Ihe eletrọniki
Un tin na -agbaze ígwè ma ọ bụ mgbapụta tin Ọ bụ ngwa elektrọnikị na -eji ebe niile, ebe ọ na -enye ohere iwepu ihe mkpuchi tin. Nke ahụ bụ, ọ ga -abụ onye na -emegide ya tin soldering ígwè. Na, ọ bụ ezie na iwepu weld nwekwara ike ime ya n'ụzọ ndị ọzọ na -adịghị mma, site na ngwa a ị ga -eme ya nke ọma na ngwa ngwa.
Ya mere ị nwere ike ịmụtakwu banyere nke a ngwá electronic, n'isiokwu a, ị ga -ahụ ozi doro anya ka ịhọrọ nke dabara adaba maka ọrụ gị.
1 Gịnị bụ ígwè na -akwatu akwa?
1.1 Otu esi eji igwe na -agbada agbada
2 Tin Desolder Aro
Gịnị bụ ígwè na -akwatu akwa?
Un tin na -agbaze ígwè Ọ bụ ngwa nkwado n'oge usoro ịgbado ọkụ. Ọ bụrụ na etinyere akụkụ welded nke ọma, ma ọ bụ weld ahụ adịghị mma ma ekpebie ịmalite site na ọkọ iji mee ka ọ dị mma, mgbe ahụ, ngwa a ga -enyere gị aka iwepu weld ngwa ngwa.
A soldering ígwè anya yiri nnọọ pensụl ma ọ bụ tin soldering ígwè ot. Na ekele maka ọnụ ya, ọ ga -enye gị ohere iwepu ebe ịgbado ọkụ ọbụlagodi na obere oghere.
Otu esi eji igwe na -agbada agbada
Na -eji igwe na -emebi emebi Ọ dị nfe, naanị ị ga -eso usoro usoro dị mkpa iji nwee ike wepu ihe mkpuchi tin. Ha nwere isi gụnyere:
Jikọọ igwe na -ere ọkụ wee chere ka ọ ruo ebe oke okpomọkụ ya, dịka ị ga -ahụ maka ịre ahịa ọdịnala.
Ihe na -esote bụ ịtinye ọnụ ya dị ọkụ na onye na -ere ya ka ewepu ya wee chere ka ọ gbazee.
Ozugbo emechara nke a, ị nwere ike wepu ite ahụ na igwe na -agbaze. Site n'inwe mgbapụta mmiri, ọ ga -enyere gị aka ị toụ tin a gbazere agbahapụ ka ihe ahụ dị ọcha.
Ozugbo ịmechara, ị nwere ike wepu ihe a sucụrụ ara ozugbo ọ gbasiri ike ọzọ ...
Tin Desolder Aro
Ọ bụrụ na ị na -eche ịzụta igwe na -emebi emebi, ị nwere ike họrọ otu n'ime ndị a ụdị ndị a tụrụ aro:
Tin Desoldering King ya na mgbapụta mmiri na ntupu na -agba agba gụnyere.
24 mpempe akwụkwọ maka ịkwa akwa: jiri igwe na -ere ọkụ, igwe na -agbaze agba, multimeter, tweezers, scalpel, ndụmọdụ ịghasa, wdg.
Wick na -egbu egbu na obosara 1mm 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 3.5mm, ogologo 1,5m.
Fixpoint tin desoldering iron nwere ọnụ ala maka ndị mbido.
SIQUK 7 iberibe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ihe eletrọniki » Igwe na -agbaze gbamgbam: gịnị ka ọ bụ, otu esi eji ya, na nke ị ga -ahọrọ
Na -enyocha transistor: akọwara ya site na nkwụsị